July Dream: September 2009
Posted by JulyDream at 11:05 PM 17 comments:
Posted by JulyDream at 2:07 AM 18 comments:
ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ဘ၀တလျှောက်မှာ တံဆိပ်ကပ်ခံရတာ ကြုံဖူးကြမှာပါ။ ကိုယ်က သူများကို တံဆိပ်ကပ်ခဲ့သလို ကိုယ်တိုင်လည်း တံဆိပ်အကပ်ခံဖူးကြမယ် ထင်ပါတယ်။ Click...
ဇူလိုင်အိပ်မက်ဆိုတာ ဘာလဲ... မသိလို့ မေးတာလား။ သိရဲ့နဲ့ မေးတာလား။ Click...
လိမ္မာတယ် တော်တယ် ကောင်းတယ် မြင်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပါ။ ကျွန်တော် အမောင်ဇူလိုင် ဆိုးသွမ်းတာတွေ အများကြီးပါ။ အူကြောင်ကြောင်လည်း လုပ်တတ်ပါတယ်။ ဂွတီးဂွကျနေတာလည်း ရှိပါတယ်။ ဘုကလန့်နဲ့ ရိုက်ချင်စရာ ကောင်းအောင်လည်း ပြောတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသားလွတ် အထင်ကြီးတော် မမူကြပါနဲ့။ Click...
လူဆိုးလေးလားပေါ့။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ခေါင်းစဉ်ပေးပြီး ပြန်ကြည့်မိတော့ မသတီလိုက်တာ။ ဒီအသက် ဒီအရွယ်နဲ့ လူဆိုးလေးတဲ့ အဟက်။ အမှန်ဆိုး လူဆိုးအဖိုးကြီးလားလို့ ရေးရမယ် ထင်တယ်။ Click...
ကျေးဇူးပြုပြီး ကျွန်တော့်အပေါ်မှာ အများကြီး မတွေးထားပါနဲ့။ အများကြီး မမျှော်လင့်ပါနဲ့။ ကျွန်တော်ဟာ လူတွေထဲက သာမန်လူတစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်တော်မှာ ခေါင်းနှစ်လုံး မပါပါဘူး။ Click...
ကျွန်တော့်အတွင်းစည်းထဲမှာ ကျွန်တော်ဟာ လူကြမ်းတစ်ယောက်ပါပဲ။ အပြင်စည်းမှာတော့ အေးဆေးပါ။ လူကြမ်း ဆိုတဲ့အတိုင်း လူမုန်းများပါတယ်။ လူမုန်းများတဲ့အတွက် မကြာခဏ အဆော်ခံထိပါတယ်။ မြို့မေတ္တာ ခံယူရပါတယ်။ Click...
မေ့နေတဲ့သူတွေအတွက်ရော... မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ရော... ရည်စူးပြီး ချီးခြောက်ရေနူးတာပါ။ ဒီပို့စ်ကို ပါးစပ်ဟပြီး မဖတ်ဖို့ ကြိုတင် မပြောမိတာကိုတော့ ခွင့်လွှတ်ပါဗျာ။ စာဖတ်တဲ့အချိန်မှာ နှာခေါင်းလေးကိုတော့ အုပ်ထားသင့်ပါတယ်လေ။ အမြင်မတော်တာရှိရင် ခွင့်လွှတ်ပါနော်။
Posted by JulyDream at 4:03 PM9comments:
ချိုမြိန်ဒုက္ခတွေ ပါးစပ်ကနေ မ၀င်တော့ရင်
စေတနာဗလပွနဲ့ အများကြီးတော့ မကျွေးပါဘူး
Posted by JulyDream at 10:42 PM 18 comments:
ဆောင်းရယ် နှင်းရယ် ကိုယ့်ချစ်သူရယ်
ဆောင်းမှာ မွေး၍ နှင်းမှာ သန္ဓေတည်
နှင်းမြူနှယ် အဆင်းဖြူတယ် ယမင်းနှယ်
ပုလဲလိုကွယ် အမြဲကိုယ် တကယ်
ချစ်သူရယ် လှစ်ကြူတယ် စကားရယ်
တေးရေးဆရာက စန္ဒရားလှထွတ်ပါ။ ဆိုတဲ့သူက တွံတေးသိန်းတန်လည်း ဆိုဖူးသလို စန္ဒရားလှထွတ်လည်း ဆိုပါတယ်။ တစ်ယောက် တစ်မျိုးစီ နားထောင်လို့ ကောင်းပါတယ်။ အဲဒါကို အမေတို့ခေတ်က သီချင်းလို့ ပြောရမလားပဲ။ ငယ်ငယ်တုန်းက ညီအငယ်ကို ပုခက်ထဲ ထည့်သိပ်ရင် မာမားက အဲဒီသီချင်း ဆိုလေ့ရှိတာ မှတ်မိနေတယ်။ တခါတလေ သနပ်ခါး သွေးရင်းနဲ့လည်း ဆိုလေ့ရှိပြန်တယ်။ ထမင်းအိုး ငှဲ့ရင်းနဲ့လည်း အဲဒီသီချင်း ငြီးတတ်ပြန်တယ်။
လမ်းထိပ်က ဆွမ်းလောင်းဓမ္မာရုံလည်း ၀ါတွင်းကာလ အာရုံဆွမ်းလှူဖို့အတွက် ဥပုသ်နေ့တိုင်း အလှူခံမဏ္ဍပ် ဖွင့်လေ့ရှိတယ်။ လော်စပီကာ အော်လံကြီး ၂ ခုကို ဟိုဘက်ထိပ် ဒီဘက်ထိပ်မှာ ချိတ်ပြီး အဲဒီလို သီချင်းတွေကို တနေကုန် နေစောင်းတဲ့အထိ ဖွင့်ထားကြတယ်။ အော်လံတစ်ခုက အိမ်ရှေ့တည့်တည့်ကို ချိန်ထိုးထားသလို ဖြစ်နေတော့ ဥပုသ်ရက်လေး ကျောင်းပိတ်လို့ အိမ်ထဲမှာများ အေးအေးလူလူ ဆော့ရမလား မှတ်တယ်။ သီချင်းသံကြားမှာ ကုန်းအော်တောင် အသံမကြားရဘူး။ မဆော့ရလို့ တီဗွီဖွင့်တော့လည်း အသံဂိတ်ဆုံး ဖွင့်ပေမယ့် အော်လံအသံကို မကျော်နိုင်ရှာပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ တောသီချင်းတွေဆိုပြီး အတော့်ကို နားငြီးခဲ့ အမြင်ကပ်ခဲ့မိပါတယ်။
အခုတလော အဲဒီ ဆောင်းရယ် နှင်းရယ် ကိုယ့်ချစ်သူရယ်ကို ပြန်နားထောင်ဖြစ်မိနေတယ်။ စန္ဒရားလှထွတ် ဆိုထားတဲ့ သီချင်းက စက်ထဲမှာ ရှိနေတော့ အိမ်မှာ ရှိနေတဲ့အချိန် ဖွင့်ဖြစ်တယ်။ စာသားတွေကို သေချာ ဂရုစိုက်မိရင် ဂွတ်ရှယ်ပဲလို့ ပြောမိမှာပဲ။ အဲဒီသီချင်းကို နားထောင် ကောင်းလို့ ကြိုက်မိပါတယ်။ စာသားတွေ လှလွန်းလို့ သဘောကျမိပါတယ်ဗျာ။
Posted by JulyDream at 11:34 PM 20 comments:
Posted by JulyDream at 1:06 AM 27 comments:
ဖော်မြူလာဝမ်း ကားပြိုင်ပွဲမှာ စင်္ကာပူကြက်ခြေနီ ရံပုံငွေအတွက် ဈေးရောင်းတဲ့နေရာမှာ လုပ်အားပေးအနေနဲ့ အရွေးခံရကြောင်း ဒီနေ့ညနေမှာ စာဝင်လာပါတယ်။ ဘ၀မှာ အတွေ့အကြုံ အသစ်တစ်ခုအနေနဲ့ ပါဝင်ကူညီ ဆင်နွှဲလိုက်ပါအုံးမယ်လေ။
စင်္ကာပူကြက်ခြေနီက ပို့လိုက်တဲ့ စာလေးကိုလည်း ဒီပို့စ်မှာ မှတ်တမ်းယူထားလိုက်ပါမယ်။
Thank you for your interest in supporting the Singapore Red Cross through the sale of Race Survival Kits for the upcoming Formula 1 SingTel Grand Prix. We are please to inform you that you have been selected to beapart of the sales team on the following days:
Confirmed date: Saturday 26th September 2009
Reserved date: NA
Due to overwhelming responses, we apologize if we are unable to assign you for all your selected dates.
Please be reminded that the duties and responsibility of the sales team include:
1. Selling of Race Survival kits at allocated areas/ zones
2. Assisting in moving of kits stocks/ sales logistics to allocated zones
3. Handling donations and payment for the Kits
4. Upholding the image of Singapore Red Cross Society
We will be creating your security passes for admission during the Race and we would like to seek your kind co-operation by submitting your digital passport size photo to susan.chua@redcross.org.sg by Friday 18th September 2009.
Posted by JulyDream at 11:14 PM 10 comments:
Labels: Living in SG, Photo, Red Cross
... ဆိုတဲ့ ဂျာမန်စကားပုံတစ်ခုရှိတယ်။
အားကျမနာလိုဖြစ်တယ် ဆိုတာ ဒါမျိုးတွေပေါ့။
ဒီတစ်ပတ်လုံး နေ့ရောညပါ စိတ်ရောကိုယ်ပါ အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးစားပမ်းစား စီစဉ်ထားသမျှ အနားကပ်မှ တေ့ဖြုတ်ခံလိုက်ရတယ်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာလည်း ကွန့်မန့်တစ်ခုကို စ နောက်ပြီး ရေးခဲ့မိတာနဲ့ ဆွမ်းခံရင်း ငှက်သင့်ခံလိုက်ရတယ်။ ချစ်သူလေးခမျာ သွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်လို့ ဆေးရုံတင်ထားရပြန်တယ်။ ဗူးလေးရာ ဖရုံဆင့်၊ မြွေပူရာ ကင်းမှောက်သလိုမျိုး စိုးရိမ်စိတ်တစ်ဝက် နှောက်ကျိနေတဲ့ စိတ်တစ်ဝက်နဲ့ ပေါက်ကွဲခါနီး ယမ်းအိုးကြီးကို စနက်တံ ဆွဲဖြုတ်ပေးတဲ့ သတင်းက ၀င်ချလာတော့ ဒေါသလှိုင်းလုံးကြီးတွေ ဆူနာမီထက် မြင့်သွားတယ်။
ကိုယ်ကျိုးလည်း မရှိ အများအတွက် အကျိုးလည်း မရှိ... ဘာလို့များ ဖျက်လိုဖျက်ဆီး လုပ်ချင်သလဲ မသိဘူး။ မျောက်ပြပြီး ဆန်တောင်းတယ် ဆိုပဲ။ တတိယကြိမ်မြောက် တိုင်ကြပြန်ပြီ။ ကြိုးစားစီစဉ်ထားတဲ့ ပွဲက ဘာလို့ ပျက်သွားသလဲဆိုတာ အဲဒီတော့မှ ဇာတ်ရည်လည်တော့တယ်။ စေတနာ ထားမိတော့ ပိုပြီး စိတ်နာရတယ်။ အကျိုးခံစားရမှာက တို့သွေးလည်းမဟုတ် တို့သားလည်းမဟုတ်ပါ။ မွေးရပ်မြေဆိုတဲ့ နှောင်ဖွဲ့မှုတစ်ခုကြောင့် ရုန်းမထွက်နိုင်တာပါ။ ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ ကျွန်ခံနေတယ်ဆိုပြီး အသိုင်းအ၀ိုင်းက လှောင်နေတာ ကြာလှပြီ။
အွန်လိုင်းမှာရှိနေတဲ့ ကိုမင်းအိုနဲ့ ပြဿနာတွေကို ရင်ဖွင့်ဖြစ်တယ်။ သူက ကျွန်တော်နဲ့ စကားပြောနေရင်း ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာ စာတွေ တင်နေပြန်တယ်။ မင်းဖတ်ဖို့အတွက် တင်နေတာလို့ ပြောသေးတယ်။ သူပေးထားတဲ့ အကြံအတိုင်း ခံစစ်ကနေ တိုက်စစ်တွေ ပြန်ဖွင့်ရမယ်။ ထာဝရ ရန်သူဖြစ်နိုင်လား ဆိုတာ ဆန်းစစ်ရပါမယ်။ ဒီလိုပဲ မိတ်ဆွေတွေကို ရန်သူ မဖြစ်အောင် စီစဉ်ရပါပြီ။ မနက်ဖြန်မှာ တိုက်ပွဲတွေ စပါပြီ။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်မှာ သူရေးတင်ထားတဲ့ စာတွေကို ပြန်ဖတ်နိုင်ဖို့အတွက် အခုလိုပဲ သိမ်းထားလိုက်ပါတယ်။
မိတ်ဆွေများနဲ့ နီးအောင်နေ... ရန်သူနဲ့တော့ ပိုနီးအောင်နေပါ...။
နည်းလမ်းရှာလို့ ကုန်တာမှ ဖြေရှင်းလို့မရသေးရင် ပြသနာကို ပိုကြီးအောင် လုပ်ရတယ်...။
သူရဲကောင်းလိုချင်ရင် စစ်ပွဲတော့ တိုက်ရမှာပဲ။ တိုက်ပွဲမရှိဘဲ သူရဲကောင်းဘွဲ့ပေးချင်ရင် လူရယ်စရာပဲဖြစ်မယ်။
ခံစစ်ကြောင်းက နောက်ဆုံးအဆင့်ကို ရောက်နေပြီလို့ ပြောလာရင် သေချာရဲ့လား မေးမနေပါနဲ့။ တိုက်စစ်ကို စပါတော့...။
ကိုယ့်အစီအစဉ်အတိုင်း မဖြစ်တော့ဘူးဆိုရင် သူ့အစီအစဉ်အတိုင်း မသွားမိအောင် အရင်ကြိုးစားဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
ရန်သူနဲ့ ပူးပေါင်းတော့မယ်ဆိုရင် မိတ်ဆွေတွေကို ရန်သူမဖြစ်လာစေဖို့ အရင် စီစဉ်ထားပါ...။
ရန်သူကို အပြီးသတ်ချေမှုန်းဖို့ စဉ်းစားရင် သူဟာ ထာဝရ ရန်သူဟုတ်ရဲ့လားကို အရင်စုံစမ်းပါ...။
ကိုယ့်ပြိုင်ဘက်က ကိုယ့်အရပ်မှာ ကိုယ်နဲ့အတူကြီးပြီး ကိုယ်နဲ့အတူ နှစ်ပေါင်းများစွာ နေခဲ့တာဆိုရင် သူလည်း ကိုယ့်ထက်ပိုပြီး မဟာဗျူဟာတွေ တတ်မနေဘူးဆိုတာ သဘောပေါက်ထားပါ...။
သြော် ဒါနဲ့ ဒီနေ့ဟာ World First Aid Day ပါ။ ဒီနှစ် ၂၀၀၉ အတွက် ဆောင်ပုဒ်က...
"First Aid skills should be available to all and not only for those who can afford it"
Posted by JulyDream at 11:48 PM 8 comments:
လူနာက သွေးသွင်းဖို့ လိုနေတယ်။ သွေးလာလှူပေးပါဆိုလို့ ဆေးရုံမှာ သွေးသွားလှူကြတယ်။ လိုအပ်တဲ့ သွေးအမျိုးအစားလည်း တူအောင် စီစဉ်ကြတယ်။ ဘီသွေးလိုတယ်ဆိုလို့ ဘီသွေးအလှူရှင် ခေါ်လာတယ်။ အေသွေးလိုတယ်ဆိုရင် အေသွေးသမား ပါလာတယ်။ ခေါ်လာတဲ့ သွေးလှူရှင်မှာ ယောကျာ်းလေးတွေလည်း ပါတယ်။ မိန်းခလေးတွေလည်း ပါတယ်။ ဓါတ်ခွဲခန်းကနေ သွေးစစ်ပြီးတော့ ထွက်လာကြတဲ့ တချို့က ခေါင်းခါပြတယ်။ တချို့က ခေါင်းငိုက်စိုက်နဲ့။ အေဘီစီများလား။ ဘာများဖြစ်ကြသလဲ ဆိုပြီး စိုးစိတ်တိုးတိတ် မေးရမြန်းရပြီပေါ့။ သူတို့ရဲ့ အဖြေက သွေးလှူလို့ မရဘူးတဲ့။
သွေးဘဏ်ကို သွေးလှူရှင်တွေ လိုက်ပို့ပေးခဲ့ဖူးတဲ့ သက်တမ်းတလျှောက် သွေးလှူခွင့်မရတဲ့ ကြုံခဲ့ရသမျှမှာ အများစုက သွေးမှာ ဟေမိုဂလိုဗင် မပြည့်လို့ပါတဲ့။ အဲဒီ ဟေမိုဂလိုဗင်ဆိုတာကို ကြားဖူးကြမယ် ထင်ပါတယ်။ မကြားဖူးသေးတဲ့သူတွေလည်း ရှိကြပါမယ်။ တချို့က သွေးလှူဖူးပေမယ့် ဟေမိုဂလိုဗင် စစ်တယ်ဆိုတာကို မသိလိုက်တာလည်း ရှိနိုင်တယ်။ တချို့က ဟေမိုဂလိုဗင်ဆိုတာ ကြားဖူးကြပေမယ့် ဘာမှန်းဆိုတာကို မသေချာ မရေရာတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပြန်တယ်။
၁၈၄၀ ခုနှစ်မှာ စတင်တွေ့ရှိခဲ့ကြတဲ့ ဟေမိုဂလိုဗင်ဆိုတာ သွေးနီဥထဲမှာရှိတဲ့ ပရိုတင်းပါတဲ့ဓါတ်တစ်မျိုးပါ။ သူက သွေးကို အနီရောင်ဖြစ်စေတဲ့ အရာလေးပဲပေါ့။ ပြီးတော့ သူက အဆုတ်တွေကနေ အောက်ဆီဂျင်ကို သယ်ပေးသေးတယ်။ ဟေမိုဂလိုဗင် မပြည့်ဘူးဆိုတာ သွေးထဲမှာ သွေးနီဥ အရေအတွက် နည်းနေတာလည်း ဖြစ်နိုင်သလို သံဓါတ်ချို့တဲ့တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တခြားအကြောင်းတွေလည်း ရှိနိုင်ပါသေးတယ်။
သွေးမလှူခင်မှာ ဟေမိုဂလိုဗင်ကို အမြဲစစ်ပါတယ်။ လက်ထိပ်က ဖောက်ထုတ်လိုက်တဲ့ သွေးစက်လေးကို အပြာရောင် ဓါတုဆေးရည် ထည့်ထားတဲ့ ဖန်ခွက်ထဲ ချကြည့်ပါတယ်။ သွေးစက်လေးက အပေါ်ကနေ ကျလာတဲ့ အရှိန်ကြောင့် ဖန်ခွက်ထဲက အရည်ထဲကို တိုးဝင် နှစ်မြှုပ်သွားပေမယ့် ဖန်ခွက်အောက်ခြေထိ မရောက်ခင်မှာ သံဓါတ် အားမကောင်းတဲ့ သွေးစက်တွေဟာ အရည်မျက်နှာပြင်ပေါ်ကို ပြန်တက်လာပါတယ်။ ဟေမိုဂလိုဗင် ပြည့်တဲ့ သွေးစက်တွေပဲ အောက်ခြေအထိ ဆင်းသွားပါတယ်။ ဖန်ခွက် အောက်ခြေအထိ မရောက်တဲ့ သွေးကို ဟေမိုဂလိုဗင် တိုင်းတာတဲ့စက်နဲ့ တစ်ခါပြန်စစ်ပါတယ်။ အနိမ့်ဆုံး သတ်မှတ်ချက်ကို ပြည့်မီတယ်ဆိုရင် သွေးလှူခွင့် ပေးပါတယ်။
ဘယ်လို အကြောင်းအရာကြောင့် ဟေမိုဂလိုဗင် အားနည်းရတာလဲဆိုရင် အဓိကအဖြေကတော့ သံဓါတ်ပါတဲ့ အစားအစာတွေ စားသုံးမှု နည်းလို့ပါ။ အသားမစားရင်၊ နို့ထွက်ပစ္စည်း စားသုံးတာ နည်းလွန်းရင် သံဓါတ် ချို့တဲ့နိုင်ပါတယ်။ သတ်သတ်လွတ် စားတဲ့သူတွေ၊ ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချဖို့ အစားရှောင်နေတဲ့ သူတွေမှာ သံဓါတ် အားနည်းတာကို တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ သံဓါတ်ပါတဲ့ အစားအစာတွေကို စားသောက်ပေမယ့်လည်း နေထိုင်မကောင်းတဲ့အချိန်၊ ကိုယ်ထဲမှာ ဗီတာမင်စီဓါတ် နည်းနေတဲ့အချိန် ခန္ဓာကိုယ်မှာ သံဓါတ်စုတ်ယူမှု အားနည်းနိုင်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း သွေးယိုစီးမှုတွေကြောင့်လည်း သံဓါတ် အားနည်းတတ်ပါတယ်။ လိပ်ခေါင်းဖြစ်နေတဲ့သူတွေလည်း ဟေမိုဂလိုဗင် အားနည်းနိုင်ပါတယ်။ မိန်းခလေးတွေ ရာသီဓမ္မတာလာတဲ့ ကာလမှာ ဟေမိုဂလိုဗင် အားနည်းနိုင်ပါတယ်။ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာလည်း ဖွံ့ထွားလာတဲ့ သန္ဓေသားက မိခင်ဆီကနေ သံဓါတ်ကို ရယူတဲ့အတွက် မိခင်မှာ သံဓါတ် အားနည်းစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိန်းခလေးတွေကို ရာသီလာနေတဲ့အချိန်၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့ အချိန်၊ မီးဖွားပြီးတဲ့ အချိန်တွေမှာ သွေးလှူဒါန်းခွင့် မပြုပါဘူး။
ဟေမိုဂလိုဗင် အားကောင်းအောင် ဘယ်လို လုပ်ရမလဲဆိုရင် အဖြေကတော့ သံဓါတ်ပါတဲ့ အစားအစာတွေကို များများ စားသောက်ပေးပါလို့ပဲ ဖြေရပါမယ်။ ပဲအမျိုးမျိုး၊ အသည်း၊ အသားတွေဟာ သံဓါတ် အားကောင်းတဲ့ အစားအစာတွေပါပဲ။ သစ်သီးတွေထဲမှာဆိုရင် ငှက်ပျောသီး၊ ထောပတ်သီး၊ သခွါးမွှေး၊ စတော်ဘယ်ရီနဲ့ စပျစ်သီးတွေက သံဓါတ် အားတိုးစေပါတယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ထဲမှာဆိုရင် ဟင်းနုနွယ်၊ ကိုက်လန်၊ ပန်းဂေါ်ဖီ၊ မုန့်လာဥ၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ အာလူး၊ ကန်စွန်းဥ၊ ပြောင်းဖူးတို့ကို များများ စားသင့်ပါတယ်။
ဗီတာမင်စီပါတဲ့ အစားအစာကို အတူတွဲပြီး စားပေးရင် သံဓါတ်စုတ်ယူမှုကို ပိုမို အားကောင်းစေတဲ့အတွက် ဗီတာမင်စီပါတဲ့ ကီဝီသီး၊ လိမ္မော်သီးတွေကို သံဓါတ်ပါတဲ့ အစားအစာတွေနဲ့အတူ စားပေးသင့်ပါတယ်။ စားလိုက်တဲ့အစာကနေ သံဓါတ်တွေ စုတ်ယူမှုကို လက်ဖက်ရည်က အနှောင့်အယှက်ပေးတဲ့အတွက် သံဓါတ် အားနည်းတဲ့သူတွေ လက်ဖက်ရည် လျှော့သောက်သင့်ပါတယ်။ လက်ဖက်လည်း လျှော့စားသင့်ပါတယ်။ တစ်ခု သတိပေးချင်တာကတော့ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ သံဓါတ်တွေ အရမ်းများနေရင်လည်း မကောင်းပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဘယ်အရာမဆို တရားလွန် မစားကြဖို့ သတိထားစေလိုပါတယ်။
သြော်... လူသားတွေရဲ့ သွေးထဲက ဟေမိုဂလိုဗင် ဘယ်လိုပုံစံမျိုး ရှိသလဲဆိုတာ ပြောဖို့ ကျန်ခဲ့တော့မလို့။ ကဲ... မြင်ဖူးသွားရအောင် ဘယ်လိုပုံစံလေးလဲဆိုတာ ပုံကိုပဲ ကြည့်လိုက်ပါတော့ဗျာ။
Posted by JulyDream at 11:19 PM4comments:
Posted by JulyDream at 10:41 PM 11 comments:
Posted by JulyDream at 11:14 PM6comments:
စင်္ကာပူကျွန်းမှာ ကျွန်းစံနေရတဲ့ ဘ၀အတွင်းမှာ ၁၀ ကြိမ်မြောက် သွေးလှူဖြစ်ပါတယ်။ သွေးလှူပြီးတော့ စလုံးကြက်ခြေနီရဲ့ 09-09-09 သွေးလှူပွဲကိစ္စအတွက် လက်ကမ်းစာစောင် လိုက်ဝေဖြစ်တယ်။ သွားရလာရတာ များပြီး ပင်ပန်းသွားလို့ အိမ်ပြန်ရောက်တော့ မှောက်သွားပါတယ်။ ဖျားတော့ မဖျားပါဘူး။
ဒါပေမယ့် အဲဒီနေ့က ချစ်သူလေး ဖျားနေပါတယ်။ သူကတော့ မာလာဟင်း သွားစားရင်း မိုးကြီးလေကြီးနဲ့ ကြုံဆုံတွေ့ပြီး အအေးမိတာပါ။ ဆရာဝန် မပြပဲ ခေါင်းမာနေလို့ အဝေးကနေ စိတ်ပူနေရတယ်။
သြော်... VNRBD ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာ မသိတဲ့သူလည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။
Voluntary Non-Remunerated Blood Donation ကို ပြောတာပါ။
စင်္ကာပူကြက်ခြေနီအသင်းက ၂၀၀၉ စင်းတဲလ် ဖော်မြူလာဝမ်းကားပြိုင်ပွဲမှာ စကာင်္ပူကြက်ခြေနီ ရံပုံငွေအတွက် ဈေးရောင်းပေးဖို့ စေတနာ့ဝန်ထမ်း လုပ်အားပေးတွေ ခေါ်နေပါတယ်။ အသက် ၁၈ နှစ်နဲ့အထက် ဖြစ်ရင် လျှောက်ထားလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စင်္ကာပူကြက်ခြေနီ အသင်းဝင်ဖြစ်ရပါမယ်။ လျှောက်လွှာကို စက်တင်ဘာ ၈ ရက်နေ့ မတိုင်ခင် စင်္ကာပူကြက်ခြေနီရုံးကို ပို့ပေးရမှာပါ။ လူဦးရေ ကန့်သတ်ထားတဲ့အတွက် ရွေးချယ်မှု စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကို ဖော်ပြထားပါတယ်။
Race days: 25 - 27 September (Friday to Sunday)
Sales Shifts: 2pm – 10pm (Fri & Sat), 2pm – 10:30pm (Sun)
Duty Attire: T-shirt (provided), Bermudas/ Jeans and Covered Shoes
Briefing: To be conducted on the event day at the reporting location
(Reporting details will be advice upon confirmation)
Meals: Dinner Coupon will be issued to every volunteer
လဆန်းနှစ်ရက် အလုပ်တွေပိ ညဂျူတီနဲ့အိပ်ရေးတွေပျက်
နောက်ဆုံးတော့လည်း ဘောနပ်စ်က ငှက်ပျောသီးပဲဖြစ်မှာပါ
တကယ်တော့ ရုံးကမန်နေဂျာကြီးဆိုတာ ကုလားကြီးဗျ
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ငှက်ပျောသီးစားကြည့်တော့ အားရှိပါ၏။
မှန်တစ်ချပ်ရှေ့မှာ အချိန်အတော်ကြာကြာ ကြည့်ဖူးကြသလား... ဘာတွေ တွေ့မယ် ထင်သလဲ။ ဘာတွေကို ခံစား ဆင်ခြင် သုံးသပ်မိသလဲ။ ပြန်ရမယ့်အဖြေက မှန်ထဲမှာ ကိုယ့်ပုံ ကိုယ်ပြန်မြင်မှာပေါ့။ ကိုယ့်ရူပကာအပေါ် ဆင်ခြင်သုံးသပ်မိမှာပေါ့။ ၀မ်းနည်း ၀မ်းသာ ခံစားမိမှာပေါ့။ အဲဒါတွေပဲလား။
မှန်ရှေ့မှာ ပြုံးပြလိုက်ရင် မှန်ထဲမှာ အပြုံးပုံလေး မြင်နေရမယ်။ မှန်ရှေ့မှာ မဲ့ပြလိုက်ရင်တော့ မဲ့နေတဲ့ ပုံလေး ထွက်လာမယ်။ မှန်ရှေ့မှာ တည်တည်ကြီးနေရင် မှန်ထဲမှာလည်း တည်တည်ကြီးပဲ တွေ့ရမယ်။ မှန်ရှေ့မှာ မှုန်ကုပ်နေရင် မှန်ကလည်း မှုန်ကုပ်ကုပ်ပုံလေး ပြလိမ့်မယ်။ မှန်ရှေ့မှာ ကုန်းပြ ကွပြ ကားပြလည်း လုပ်သမျှ ပုံစံအတိုင်း မှန်က အချိန်နဲ့ တပြေးညီ လိုက်ပြနေလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ်လိုလို မှန်ကြည့်ကြပေမယ့် မှန်အကြောင်းကို ဟိုဟိုဒီဒီ တွေးမိခဲ့ကြရဲ့လား။ မှန်ဆိုတာ သက်မဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုပါ။ နူးညံ့တဲ့ ၀ါဂွမ်းစလိုမျိုး မှန်တွေ မရှိပါဘူး။ မှန်ရဲ့မျက်နှာပြင်က မာကြောနေတာ သဘာဝပါပဲ။ ဒါကြောင့်လည်း ကွဲလွယ်ရှလွယ်တဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုပေါ့။
မှန်တွေဟာ သစ္စာရှိပါတယ်။ မှန်တဲ့အတိုင်းပဲ ပြတယ်။ ပြုံးနေတာကို မဲ့နေတယ်လို့ မပြဘူး။ အိုမင်းနေတာကို နုပျိုတယ်လို့ မပြဘူး။ မဲတူးနေတာကို ဖြူဝင်းနေတယ်လို့ မပြဘူး။ လှတဲ့သူကို အကျည်းတန်သူလို့ မပြဘူး။ ပုံပြင်ဇာတ်လမ်းတွေမှာတောင် မှန်တွေ သစ္စာရှိတဲ့အကြောင်းကို ဖွဲ့နွဲ့ရေးသားကြတယ်။ စနိုးဝှိုက်ပုံပြင်ထဲက စုန်းမကြီးရဲ့ မှော်တန်ခိုးနဲ့ စီရင်ဖန်တီးထားတဲ့မှန်တောင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘယ်သူအလှဆုံးလဲ ဆိုတာကို မေးလိုက်တိုင်း အမြဲတမ်း အမှန်တရားကိုပဲ ပြလေ့ရှိတယ်။ ပိုင်ရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့ စုန်းမကြီးရဲ့ အလိုကိုလိုက် အကြိုက်ဆောင်ပြီး မုသားမသုံးခဲ့ဘူးတာ ဖတ်ဖူးကြမယ် ထင်ပါတယ်။
မှန်တွေဟာ မှန်တွေရဲ့ သဘာဝအတိုင်းပဲ မှန်မှန်လေးနေလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မှန်ကြည့်တဲ့လူတွေက အမှန်ကို မြင်ရတဲ့အခါမှာ တခါတလေ လက်မခံတတ်ကြပါဘူး။ လက်မခံဝံ့တာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ မှန်က အရှိကို အရှိတိုင်းပဲ ပြနေတယ်။ ဒါကြောင့် မှန်မှာ အပြစ်မရှိပါဘူး။ တချို့လူတွေကသာ မှန်က ပြတဲ့ပုံရိပ်ကို လက်မခံနိုင်ကြဘူး ဖြစ်နေတာ။ အဲဒါကိုက မှန်ရဲ့ ပြဿနာဖြစ်နေတယ်။
အပြစ်မရှိတဲ့ မှန်ကို ဒေါသစိတ်နဲ့ ထိုးခွဲပစ်ကြတယ်။ ချခွဲပစ်ကြတယ်။ ရိုက်ခွဲပစ်ကြတယ်။ အဲဒီအခါမှာ မှန်တွေ တစ်စစီ ကွဲသွားပါပြီ။ အစိတ်စိတ် အမွှာမွှာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မှန်ကွဲစမှာ အချွန်အတက်တွေလည်း ထွက်နေနိုင်တယ်။ အဲဒီလို ကွဲနေတဲ့ မှန်တွေထဲကို လှမ်းကြည့်လိုက်ရင် ဘာတွေ ပြနေမယ် ထင်သလဲ။ မှန်ကွဲတွေက အမှန်တွေပဲ ပြနေသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ လှလှပပတော့ မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့။
လောကမှာ မှန်တွေရဲ့ တန်ဖိုးကို နားလည်ခံစားတတ်တဲ့လူတွေ ရှိသေးတာကိုက မှန်တွေအတွက် ဖြေသိမ့်စရာ ကျေနပ်စရာလေးပေါ့။ မှန်တွေအတွက် ကျွန်တော်လည်း မှန်တစ်ချပ်ကို တန်ဖိုးထားပါတယ်။
Posted by JulyDream at 11:14 PM 20 comments:
Labels: Opinion, Photo